Aiza no hitantanana ny hafatra, amin'ny alàlan'ny Thunderbird na Firefox? | Avy amin'ny Linux
Aiza no hitantanana ny hafatra, amin'ny alàlan'ny Thunderbird na Firefox?
Efa hitantsika ny vaovao izay hitondra antsika tsy ho ela Mozilla Thunderbird 13 y Mozilla Firefox 12 ary samy manana ny mampiavaka azy ireo izy roa: Mampifandray hafatra avy hatrany izy ireo.
Hitanay talohan'izay ary asehoko anao indray:
Ary ny irakiraka ao Thunderbird:
Amin'ny tranga Mpanjifa mailaka, Nanandrana ny kinova 13 aho izay mampiditra an'io safidy io, ary farafaharatsiny mba farafahakeliny io dia voafetra, satria mamela tsotra izao ny fampiasana ny kaontin'ny GTalk, Facebook, IRC y Yahoo raha tsy diso aho, ka serivisy hafa toa ahy XMPP voahilika izy io raha tsy hoe afaka ampidirina amin'ny alàlan'ny fanitarana.
Ny teboka tiako ho tonga dia hoe iza no ampiasaiko avy eo Hafatra? Raha manontany ahy ianao dia manana valiny iray monja omeko: tsy misy. Hatrany am-piandohana dia tsy hitako ny fomba hanampiana ireo fampiasa "extra" ireo amin'ny rindranasa roa, afaka manatsara ny fahombiazan'izy ireo izany. Raha efa, betsaka Thunderbird como el Firefox mandany fahatsiarovana be dia be, tsy te hahita aho rehefa mampiditra a Mpanjifa IM. Raha tsy hoe mahay manatsara bebe kokoa ny loharano aza izy ireo, izay tsy isalasalako.
Ny hevitra fampidirana dia toa tsy ratsy amiko, ny mifanohitra amin'izay, mety hamokatra be izy io. Raharaha fahombiazana iray ohatra, raha manamarina ny mailaka amin'ny Internet isika (Gmail, Yahoo ... sns) ary noho izany dia tsy mila manokatra ny navigateur fotsiny isika, ka tena ilaina tokoa ny manana ilay Mpanjifa IM misy. Fa raha ny amiko, matetika aho dia samy manana fisoratana anarana misokatra tontolo andro, ary iray amin'ireo tiako kokoa ny manao izay tsy maintsy atao fotsiny, Firefox mamily, Thunderbird ho an'ny mailaka. Ho an'ny fandefasana hafatra mankany Pidgin, izay manohana ny habetsaky ny protokol misy ary 100% no tontosa io fiasa io.
Aleoko ny mpamorona ny Mozilla mandany ny fotoananao amin'ny fanjifana ny rindranasa roa, ny fanatsarana ny fisehoany, ary ireo safidy ifotony fa tsy ny fanandramana hampihatra zavatra izay efa ananantsika safidy hafa. Izany no hevitro. Ahoana ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Aiza no hitantanana ny hafatra, amin'ny alàlan'ny Thunderbird na Firefox?
Izaho dia iray amin'ireo izay mihevitra fa tsara kokoa ny manao zavatra tokana, saingy ataovy tsara izany.
Perseus dia hoy izy:
Valio amin'i Perseus
Eny, heveriko fa ireo firefox tsy mahalala izay tokony hatao, te hamerina ireo mpampiasa very tamin'ny chrome izy ireo ary mazava fa ny fomba fisainantsika dia tsy mitovy amin'ny fomba fisainan'ny ankamaroan'ny olona. Tsy tiako ny olan'ny mpanjifa fandefasan-kafatra, tsotra fotsiny satria hitako fa voafetra izany ary mangataka zavatra betsaka kokoa amin'ny client IM aho, toy ny fitehirizana ireo hazo, mampiseho ireo hira izay henoiko amin'ny ankamaroan'ny mpilalao na manana smiley hafa .. . ary mazava ho azy fa ho avy ny fotoana alohan'ny firefox na thunderbird afaka manao izany.
Toa hadalana amiko ny manao an'io ... maninona no manasarotra ny fiainana raha misy isika Pidgin Inona no atao hoe client multiprotocol? Inona koa, mpampiasa ny Windows y MacOSX Tienen Trillian astra izay mitovy amin'ny Pidgin, fa mangatsiatsiaka kokoa. -http: //trillian.cachefly.net/trillian.im/windows/screenshots/trillian5-desktop.png http://trillian.cachefly.net/trillian.im/mac/screenshots/mac-infocard-l.png-
Resa-be amin'ny fifampiraharahana amina mpanjifa fandefasan-kafatra mihoatra ny iray… tsy haiko… tsy maharary izany fa tsy hovidiko toy ny vatosoa ao amin'ny satroboninahitra.
Nanandrana trillian astra tao amin'ny hackintosh aho ary tena mandeha tsara izany, apetrako eo ankilany ny ichat, izay raha hitako fa ratsy tarehy dia rehefa nanandrana azy teo am-baravarankely aho, tsy haiko izany, saingy tsy mifikitra amin'ny aero na lakaoly.
Hitako fa tafiditra tsara tao anaty lohahevitra izy: http://trillian.cachefly.net/trillian.im/windows/screenshots/trillian5-desktop.png
Toa ratsy tarehy izany amiko satria manome fahatsapana pidgin plastika ahy io….
Ary maninona no tsy ovanao ny hoditra? http://developer.ceruleanstudios.com/index.php/Full_Skins
Mampiseho izany fa tsy misaina toa ny mpanao mari-trano ^^ U ianao
Rehefa hitantsika ity fihetsika ankapobeny ity ... Moa tsy ny zavatra lojika indrindra ve ny mampiditra mivantana ity fampiasa ity ao anaty tranokala? Farafaharatsiny mba azo hatsaraina tsara kokoa noho ny ivelan'ny tena fotony.
Mazava ho azy fa tsy mampitaha azy amin'ny Pidgin sy ny toy izany (farafaharatsiny amin'ny lafiny Firefox, tsy dia fantatro ny fomba fampiharana azy ireo amin'ny Thunderbird) satria toa tsy te hanantona an'io fomban'ny programa io akory izy ireo, fa ny gmail na fb fomba fifampiresahana mahazatra, izay amiko, dia misy dikany eran'izao tontolo izao.
Saingy mbola hitako misimisy kokoa ny mpanjifa IM misimisy kokoa. Andao lazaina fa noho ny antony X dia manakatona ny tranokala ianao, na ny mpanjifanao mailaka, na mihidy izy ireo noho ny Bugs. Inona no mitranga? Very ny resaka nifanaovanao tamina olona iray. Ao Pidgin dia azonao atao ny mampiditra Gtalk, Facebook Chat, Yahoo ary ireo protokolola hafa ao anaty programa iray nefa tsy mila mampiasa tabilao hafa (toy ny amin'ny browser) hahafahana mifampiresaka.
Mazava ho azy, miresaka mialoha ny zava-misy isika, ilaina ny mahita hoe inona ny tanjona sy ny tolo-kevitra farany an'i Mozilla.
Manaiky koa aho fa tsara lavitra ny mpanjifa, saingy misy izany: ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mampiasa an'ireny chat ireny ao anaty tranokala.
Heveriko fa na iza na iza mampiasa ny chat room amin'ireo tranokala ireo ary tsy manelingelina ny manokatra azy ireo amin'ny client, dia hanohy hanao izany na dia manana mpanjifa mitovy aminy aza izy ireo "eo akaikiny." Mihoatra ny fananana azy "indroa" fa ananan'izy ireo anaty iray, ilay efa fantany sy efa nekeny ary "tsy sarotiny."
Tsy ekeko koa, toa ahy fa ny te hampiditra asa marobe amin'ny browser (na amin'ny mpamaky mailaka) dia hampiadana kokoa azy io, mpamatsy loharanon-karena be dia be ary hadisoana be dia be tokony hamboarina. Izaho dia mpampiasa tsy tapaka an'ny roa tonta, ary toa an'i Elav dia matetika no nosokafako isan'andro izy ireo, ary tsy hitako fa mihatsara be ny fiasan'ny iray amin'izy ireo, ary koa efa maro ny efa nilaza fa efa manana Pidgin isika, ary ao Windows / OSX misy fampiharana Mitovy.
Handeha hanome hevitra aho / hanampy zavatra hafa, saingy hadinoko ilay izy XD. Ny tena marina dia manaiky 100% amin'ilay lahatsoratra aho ary miaraka amin'ireo hevitra ambiny ihany koa, tsy dia misy azoko ampiana. (Azoko antoka fa hanome "mandefa" aho ary tadidiko izany).
Miombon-kevitra tanteraka amin'ny mpanoratra an'ity lahatsoratra ity aho.
Valiny tamin'i Simon
O ry a, heveriko fa mahafinaritra ny manana messenger tafiditra ao anaty browser-nao na amin'ny mailaka-nao, koa tsy mila miditra gmail na facebook akory ianao, zavatra mahaliana ohatra izany ny orinasa iray mampiasa interface web afaka manana ny zavatra rehetra mpampiasa voasoratra anarana amin'ny orinasa ka nandefasana naoty mba tsy hanana programa misokatra hafa ianao, mazava izany fa raha mandany loharano maro ny mpitety tranonkala satria azo antoka fa hisy fiantraikany amin'ny safidy izany dia tsy maintsy hofoanany foana izy io, satria tsy azo atao ny miseho amin'ny fizahana azy. miova be ho ahy fa varavarankely misy zavatra mampiseho anao, manokana izay browser tadiaviko dia filaminana bebe kokoa, fampiasana loharano tsara kokoa ary raha azo ampidirina safidy hafa izay tsy mila manana fampiharana lehibe intsony, tsara kokoa sy tsara kokoa raha multiplatform io.
Raha ny marina dia maniry bebe kokoa aho raha toa ka plugin iray izay mampihetsika ireo fiasa ireo ... izany hoe, raha tsy izany dia mivoaka izy io ary manana ny mety / safidy hampiasana ireo fampiasa vaovao ireo 🙂
oleksis dia hoy izy:
Avelao izy…… Avelao hirehitra ny eritreritrao. Raha te-hamorona Web tsara kokoa (ho an'ny tranonkala misokatra misimisy kokoa - #PWMA) i Mozilla dia toy izany… AMEN
Mamaly an'i oleksis
Ny sehatr'asa My Desktop + amin'ity herinandro ity
Sabayon 8, Post-Installation, ny zavatra tsapako ary zavatra hafa (Nohavaozina)